Sidee ayaad ku dari farshaxanka si Lugood
Sidee aad ku dari farshaxanka si Lugood?
Ma songs Lugood aad maqan farshaxanka qaar ka mid ah? Haa, waa suurtogal in ay dib ugu heli lahayn farshaxanka ku maqan ee Lugood aad. More, waa inta badan sahlan.
Beddel Gacanta farshaxanka ah
Ma taqaan sida loo soo ceshano farshaxanka heestii? Waa hagaag, dad badan oo dhihi lahaa Lugood samayn karaa shaqada helo farshaxanka album ah. Haa, waxa laga yaabaa inay shaqayn karaan qaar ka mid ah xilliyada laakiin mar walba ma shaqeyn lahaa. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxa jira hab lagu beddelo farshaxanka gacanta laakiin haddii aad la boqolaal album looga qabto ka dibna aad dooneynin inuu u dhumin waqti aad.
Maxay muhiim u tahay in la beddelo farshaxanka ah?
Users badan ayaa si guul leh loo isticmaalo hab halkaas oo aad ka dooran album oo isticmaal doorasho ee ka Lugood Get Album farshaxanka. Tani waxay u muuqataa hab sahlan, laakiin waxaa laga yaabaa in aadan ku qanacsanayn natiijada. Ha noo arkaan sababta habkan uma shaqeeyo sida aynu ka filan.
1. Marka hore, Lugood iskaan doonaa farshaxanka album ku salaysan tallaabadaas ku arrimo la xidhiidha faylasha sida horyaalka, album, ama farshaxanka. Tani waa habka ugu waxtar song kale laga yaabaa in ay erayo la mid ah in ay horyaalka ama album. Sidaa awgeed, waxaa jira in badan oo farshaxanka in software mari doontaa. Saxnaanta Waxaa hakin doonaa.
2. Haddii aad u jecel artist ah, waxaa la hubaa inuu noqon tiro ka mid ah heesaha isaga by. Inta badan, Lugood doorto farshaxanka artist u album ah, iyo mararka qaarkood tani ma laga yaabaa in xitaa distantly la xiriira album.
3. Haddii aanay jirin xog ama xitaa tags, markaas Lugood ma noqon karaa wax kasta oo la xiriira farshaxanka album ama file.
4. Haddii farshaxanka waxaa laga heli karaa goobta meesha aqoonsiga waxaa looga baahan yahay, Lugood laga yaabaa in aanay awoodin in ay dib u soo ceshano farshaxanka ah.
5. Qaasaali magacyada iyo tags la mid ah ayaa keeni karta in la farshaxanka la mid ah, kaas oo abuuri doonaa aragti ah ee files nuqul on Lugood aad.
Sidaa awgeed, habka kor ku xusan ma aha doorasho la hirgalin karo helitaanka farshaxanka. Malaha isticmaalin, waayo, mid ama laba album wada laakiin kuma albums badan. Sida aynu hore u Yaqaannaan gacanta ku daray farshaxanka si file kasta oo album waa waqti lumis, sidoo kale waa ma fursad weyn.
WonderShare TunesGo - Xulashada A Great?
WonderShare TunesGo waa mid ka mid software weyn ka go'an in ay helitaanka album ka maqan daboolayaa in albums. Waa mid ka mid ah software premium yaabab halkan ka. Si kastaba ha ahaatee, waa la dar-ku oo u baahan Lugood in uu ordo software this. Waa software multifeatured.
Features ee TunesGo
- Waxaad ka qalabka macruufka kale ku wareejin karaa music. Sidaa awgeed, aad u cusbooneysiin karaa aad Lugood maktabadda kombiyuutarka si sahlan.
- Waxa kale oo aad waafajinta karaa Android la Lugood, taas oo ah waa in hadda maalmood korodhka isticmaalka qalabka Android.
- Waxaad ka YouTube iyo goobaha kale geeyo kala soo bixi kartaa ama music dukaanka. Waa mid ka mid ah qaababka cusub.
- Nadiifi Music aad idil Library halkaas oo aad ku dari kartaa tags maqan, daboolida album iyo tirtirtaa files nuqul. Waxaas oo dhan waxaa loo sameeyaa in qasabno yar.
- Waxaad gacanta music ka Lugood bedeli karaa qalab aad kaliya ku jiididda iyo hoos u feature.
-. Waxaad playlist leh qof kasta oo ka mid fudud click wadaagi kartaa in aad software ka soo dejisan kartaa Wondershare. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa in la iibsado nooca buuxda u adeegsadaan si ku daray farshaxanka si albums aad.
Ku darista cover heestii
Ka dib waa habka sida aad u isticmaali kartaa in aad ku darto cover album ah:
1. Marka aad soo bixi software-ka, waxa loo soo dajiyo laakiin waa in aad haysataa Lugood aad Mac. Ma aha oo kaliya lagu rakibay laakiin, waa in beehsa. Tani waxaa loo baahan yahay sidii aad u baahan tahay album uu ku noqon karo maktabadda Lugood.
2. Hadda abuurtaan TunesGo ah. Dhinaca midig ee xagga hoose ee suuqa, waxaad ka heli doontaa fursad u, nadiifi Lugood Library. Just guji ku yaal, iyo baaritaan lagu bilaabi doonaa tags maqan, seegay farshaxanka album, seegay kuwan raadkaygay Lugood iyo Akownnada heeso. Waxay qaadataa dhowr daqiiqadood ka dibna aad u wanaagsan si ay u tagaan.
3. Next, doorato waxa aad doonayso in aad qabato. Natiijadan ayaa ku tusi doona sida kuwan raadkaygay badan yihiin daboolida maqan. Haddii ay jiraan in ka badan 10, aad aad u baahan doontaa version full of software sida xad version Ibtilo daboolida 10 oo keliya.
4. Hubi in tareenka la dabool ka maqan waxaa loo saxay ka hor inta aadan guji Nadiifinta. Gujisid kale ka soo muuqan doona shaashada kaaga weydiisanaya xaqiijin. Just guji Nadiifinta.
5. Hadda waxaad la sameeyo! Software ayaa si toos ah kuugu dari doonaa farshaxanka ku raad maqan. Waxaad ka arki kartaa farshaxanka ku tareenka maktabadda Lugood ah.
Habkani waa sax ahayn Lugood Get doorasho farshaxanka ah. Tani waa sababta oo ah waxaa jira software quduuska horumariyo kaliya ujeeddo ah ku daray hay'adaha maqan sida tags iyo dabool inay raadkaagu. Intaa waxaa dheer, waxa ay tirtirto doonaa gabayadii nuqul aad nafaha meel qaali ah.
Wali waad isticmaali kartaa habka caadiga ah ee ku daray farshaxanka gacanta ama isticmaalaya fursadaha Lugood. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadinayso in lagu daro aad u badan tahay daboolo boqol ama kun, taasi waxaa laga yaabaa in uusan noqon mid sax ah oo wakhti dheer qaata. Kor habka shaqo ee qasabno yar samayn doonaa, oo waa ka xoog badan Lugood ee dheer ee helitaanka farshaxanka ee la waayay. Waxaad eegtaa bogga interneetka Wondershare wixii faahfaahin ah iyo taageero dheeraad ah.
Jidadkiisa oo dhammu waa inay badbaadi / Lugood ee kaabta in Your Library
A Guide Full on sidii ay u cusboonaysiiyaan iPhone la / aan Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan Songs ka Lugood in iPad
> Resource > Lugood > Sidee waxaad ku dari farshaxanka si Lugood